”Waxaan Idiin Warami-Doonaa Hadii Aan Soo Miyirsado” Akhriso Qiso Cajab-Badan Oo Dhexmartay… | Gabiley News
October 23, 2017 - Written by office gabiley
Gabiley News ”Waxaan Idiin Warami-Doonaa Hadii Aan Soo Miyirsado” Akhriso Qiso Cajab-Badan Iyo Qalinkii Qoraa Cabdiraxmaan Faarax Caamir.
Waxaan usoo guurnay xaafad cusub . xaafad bilaa dhaqdhaqaaq ah , guryaha xaafada ee aan la moodin inay cidi ku nooshahay xisaabta kumaan darsan inay ku jirto qof wacyi iyo waayo badani na dhex mari doono . mid yar oo walaalkay ah ayaan geeyay malcaamad uu dhigto ku yar oo walaalkeed ahi .
maalmo kadib ayaa kii yaraa ee walaalkeed oo warqad gal cad ku jirta la ordayaa ii yimi “Hooo … Nasraa kuu soo dhiibtaye” ayuu si yar oo hoose iigu yidhi , inuu sidaa yaree hoose u yidhaahdo waa lagulasoo dar-daarmay qiyaastii . waan bilaabay , dareen aan ka nuuxsan waayeybay xambaarsanayd runtii .ugu danbayn intii aan jawaab soo dhawayn ah qori karayey ayaan ku qoray waraaq aan qurxiyay . kii yaraa ee waraaqdii iga yaabisay ii keenay ayaan anna markayga u dhiibay , wasiirkayaga boostada iyo is-gaadhsiinta buu sidaa ku noqday . galabtaas subaxdii ka danbeysay iyadoo guriga hortiisa fiiqaysa ayaan damcay inaan la hadlo “Salaama calaykum” iyo “Calaykuma salaam , walaal” markaanu is dhaafsanay anagoo dhoolla-cadaynayna ayay ishaydu qabatay islaan jaarka ah oo guri sekeda soo jeeda ah fiiqaysa oo si anshaxa is eegista ka baxsan noo soo eegaysa!
Wajahad fiiqista iyo ololaha kooban ee nadaafadeed ee salaada hore waa dhaqan ay ka midaysanyihiin dumarka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba . salaantii kadib hadal kale lama galine waan iska dhaafay oo gurigayagii baan galay . galab danbe ayay hooyadeed iga codsatay inaan laydhka oo gurigooda ka xumaaday u eego maadaama aan laydhka wax ka yara aqaano . gurigiibaan tagey , laydhkiibaan eegay hagaajintiina waan ku guulaystay . markasta oo laydhku guriga ka xumaado anay ii yeedhi jirtay aad bay ii aamintay .
safiirka gaarka ah ee xaafadeeda u fadhiya xaafadayada ayaan noqday . mudadii aan xilkaa hayey waxyaabo badan ayaa ii suurto galay . inaan helo nomberka nasro ayaa ii qabsoontay . inuu xidhiidh wada hadal noo bilaabmo ayaanu ku guulaysanay . inaanu is fahamno ayaanu nasiib u yeelanay . kaftankeedaan iska goyn kari waayey . saacadda aanan la hadlayni waa saaacadda aan what’s appka ka akhriyayo fariimihii aanu hore isku waydaarsanay, what’s appka uun ma’aha messengerka ayaan isna ka muraajacaysan jiray hadaladii kaftanka ahaa ee aanu nasra is waydaarsanay . maalin kasta ayaan la hadli jiray dhawr wakhti . saddexda wakhti wixii la isku xukumi jiray soo daawooyinka ma ahayn ? dhakhtar goobta uu fadhiisto aanan garanayn ayaa igula taliyay inaan saddexda wakhtiba nasro la hadlo! Subaxdiibaan wacaa , Hadal yar oo aad moodo dhuun xalay oo dhan la culayey inuu kasoo baxayo ayay iigu jawaabtaa waan isku dhex yaacaa ilaahaybaa runta jecele way iga badisaa! Degdegbaan u maca-salaameeyaa tilifoonkaan jaraa hadaladii ay lahaydbaan dib ugusoo ceshadaa “Alla haaaaa waa runteed” iyo hadalo kale ayaan kaligay iskula hadaaqaa! Muuqaal maskaxda kusoo dhaca keedaan ugu jeclaa magac la sheegana “Nasra” ayay dhegahaygu ugu jeclaayeen may jeclayn ,
way ku mabsuudi jireen . xitaa hadii aanu “Nasra” ahayn magacyada “N” ka kaca waan iska jeclaa. Dugsigaan tagaa macalinka sayniskaa noo soo gala Cudurada faafa iyo khatartaay leeyihiinbuu noo dhigaa , Nasraan uga baqaa balaayadaa uu sheegayo . Macalinka taariikhda ayaa markiisa noosoo gala Dagaaladii 1aad iyo 2aad ee aduunka iyo sidii loogu hoobtay ayuu nooga waramaa, ilaaha aan taariikhdaa xun nasra soo gaadhsiinbaan hoosta uga mahad naqaa . macalinka diinta islaamka dhiga ayaa isna soo gala Geerida iyo Sakaraatul mawdka ayuu nagu baraarujiyaa , Naftayda uma baqo’e ma waxaasaa Nasra u danbeeyaan idhaahdaa!
“ Waar walaal aniga iyo saaxiibadahay ayaa burri hotel Soobbe aadayna oo dharbaan kaawiyadaysanayaaye ha I jeedin” waxay ka mid ahaayeen hadaladii u danbeeyay ee aanu Nasra is dhaafsanay wakhti daayicii nolosheeda habeenkaas oo ahayd habeen jimce sii baxayo Sabti aanay haboonayn inay soo gashaana soo geli rabto . bisha Actober 13 ayay ahayd maalintaa 14aad inay iskaga boodaa wacnaan lahaydaa! Saddex boqol iyo siyaado ashahaadanaysa ayaa hal mar dhiigoodii dhulka ku daatay , ruuxdoodiina samada aaday aadbaan uga argagaxay runtii . Geerida Nasra se dareenka aan kaga fal-celiyay waxaan soo sheegi doonaa hadaan caadi noqdo! Dad badan baa iigu soo duceeyay “Samir iyo iimaan” ducadaas inaan laga aqbalin iyo inay aqbalaadeedu wakhti qaadanayso mooyi! Goortay doontaba ha noqotee waxaan idiin waramayaa hadaan Miyirsado .
Qoraa: Cabdiraxmaan Faarax Caamir